Yintoni iQela lokuJonga-Elona lilungileyo lenkxaso ekude-iGeofumadas
NgoDisemba, 2010 Internet kunye neBlogs, egeomates My
Yonke imihla kulula ukuba unike inkxaso ngenkxaso xa usebenzise amacebo anikezelwa yi-intanethi kunye neenkqubo zokufikelela ezikude. Eli nqaku lichaza ukuba yiyiphi i-TeamViewer kunye nendlela yokuyisebenzisa ngayo kwimeko yokusetyenziswa.
Ingcali yobhaliso lomhlaba, kumasipala oneendlela ezingafikelelekiyo, iikhilomitha ezingama-48 ukusuka apho uyasitsalela. Ukhankanya ukuba uneBhunga looCeba phambi kwakhe lokwenza umboniso kwaye akukho nto isebenza. Uchitha imizuzu emi-5 echaza ingxaki kuthi, sichitha imizuzu eli-10 ukuzama ukumqonda-kwaye asicacisele-ekugqibeleni ukuze sifikelele kwisigqibo sokuba ngenxa yoxinzelelo lwegcisa elingayiqondiyo kwaye asinakumnika uncedo ngomnxeba.
Ngaphambi kokuba ndisebenze usebenzisa LogmeIn, Eliliqonga elomeleleyo lokufikelela kwiikhompyuter kude nge-Intanethi okanye kwi-Intranet. Olunye lobo busuku, umhlobo wegeofumed ovela eMexico wandicacisela ukuba yintoni iTeamViewer, kuba sizakusebenza ngonxibelelwano olucothayo ngemodem kwaye sinxibelelana neelaptops zokudlala (Acer Aspire One netbook). Ndothukile emva kokuhlazisa into ebonakala ngathi sisixhobo esilula.
Yintoni iQelaViewer kunye nendlela yokuyiqhuba ngayo?
Ukuqonda ingxaki kunye nesisombululo yindlela efanelekileyo yokuqonda ukuba yiyiphi i-TeamViewer; akuyikho isisombululo sokubonisa isikrini kwikhomputha.
Kukho yintoni ofuna ukuyilanda, sikhetha iqonga esisebenza kulo. Kule TeamViewer yeyona ilungileyo, inokuqhuba kwiWindows, Mac, Linux nakwiiselfowuni (I-Pad, i-Android, Iphone). Kuyimfuneko ukuba bobabini abasebenzisi basebenzise uhlobo olunye lwenkqubo, ukuba akunjalo, inkqubo yazisa umsebenzisi ukuba ayihlaziye; hayi kwinkqubo yokusebenza kodwa kwisixhobo sonxibelelwano, esiliQela lokuJonga. Ayinamsebenzi ukuba usebenza kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza.
Akufuneki ukuyifaka, ngokwenza njalo kukhathalela amalungelo olawulo. Ngokukhetha Qala isebenza phantse ngayo yonke imisebenzi; Ndikhetha le kuba ngenxa yokuba yonke imihla kuphuma uhlobo olutsha, iba yingxaki ukufakelwa ngalo lonke ixesha. Ukongeza, ukuyiqhuba ngale ndlela kukhululekile, ukuba ayisiyiyo eyorhwebo.
Xa sele yenziwe, le nkqubo inika i-identifier yefom yefomu 145 001 342 kunye negama lokugqitha elinemivo emi-4 nangona linokulungiswa Eli linani ekufuneka linikwe umsebenzisi ofuna ukudibanisa kude; ibhaliwe kwicala lasekunene usebenzisa ukhetho Uncedo olude kwaye iphasiwedi ingenisiwe.
Nje ukuba uqhagamshele, unokubona okwenziwa ngumsebenzisi, kubandakanya ukuthatha ulawulo usebenzisa imouse okanye ikhibhodi. Kukho izinto ezisisiseko ezisebenzayo njengokuthumela umyalezo kwangoko ngelizwi kunye nokudluliswa kwefayile okwenza ukuba ube luncedo ngakumbi.
Umsebenzisi uqhagamshela kwi-Intanethi, ukhuphele iQelaViewer (ukuba akenzanga njalo), uyenza kwaye asithumelele i-ID / iphasiwedi. Ngale nto, unokufikelela kwikhompyuter kwaye usombulule ingxaki; Kuyenzeka ukuba uyisebenzise ukuqhagamshela kumatshini okude apho inkqubo isebenza ngokuchanekileyo ngalo lonke ixesha lokubonisa.
Izixhobo zesi sixhobo zininzi. Andibonisanga kunxibelelwano ngenkxaso ekude, kodwa kukho ezinye iindlela zokudlulisa ifayile, intetho kunye noqhagamshelo lweVPN. Kananjalo ukuba ifakiwe kukho ezinye iindlela zokulawula abasebenzisi, into esabelana ngayo nabanye vericuetos.
Ngokufutshane, ndibona amandla amaninzi kula maxesha ukuba imfundo yoluntu inika ixabiso elithile kwi-classic training ukuba sisebenzisa ngokunxibelelwano.
Into eluncedo inokuba yeenjongo zenkxaso ekude, kunokwenzeka ukuba abasebenzisi abaliqela banxibelelane kumatshini omnye, bakwazi ukubonwa ngabasebenzisi abohlukeneyo bezinto ezahlukeneyo. Umzekelo, umdwelisi weenkqubo, uchwephesha wemephu, kunye nengcali yenkxaso yendawo; ukusombulula iingxaki ezinzima.
Olunye uncedo oluthambileyo lubonakaliso olude, njengokubonisa inkqubo efakwe kumatshini wedesktophu okanye ephethe idatha engenakufuduswa kwidiski yangaphandle.
Ukulungiselela iinjongo zoqeqesho, iyasebenza kakhulu. Ingcali inokuba inika inkomfa kwelinye icala lehlabathi, kwaye inabasebenzisi abohlukeneyo abaxhume ukubukela inkqubo, nokuba bayasebenzisana.
Kuyakwazi nokuba luncedo, ukuba uya kuhamba, kwaye ulindeleke ukuba ube nokufikelela kwikhomputha esasishiya eofisi.
Inkokhelo ehlawulelwayo ivumela inkxaso malunga nezixhobo ezininzi, kuquka ukudala ipaneli yangokwezifiso ukusabalalisa, ekwazi ukuqhuba isitshixo, uphawu kunye nemibala engabonakali njengeQelaViewer.
Ngokwenkampani ithi malunga neQelaViewer, unxibelelwano lubhalwe ngokufihlakeleyo kwaye ukhuseleko luqinisekisiwe. Nangona kunjalo, kufanelekile ukufundisa abasebenzisi okwenzekayo ngokubonelela ngokufikelela okukude, kuba inokusetyenziselwa kakubi iinjongo zobuntlola.
Khuphela uze ubone i-TeamViewer yintoni.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Facebook: iividiyo ukuba abahloli umhlaba
Post Next … Ndixakekile kodwa ndonwabileOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-2 "Yintoni iQela lokujonga iqela-Eyona ilungele inkxaso ekude"
IQela lokuPhatha uthi:
Yona nkqubo yam intandokazi, ndiyisebenzela abathengi kwaye ndisebenzisa i-teamviewer ukucwangcisa iinkcukacha zam oda, ngaphambi kokuba ndisebenzise ukwenza imisebenzi yeqela kwiyunivesithi, kunye nenkqubo eyenza ubomi bube lula kuwe.
Ukuba unomdla kwamanye amacebo okuxhumeka kwideskithophu ekude, ungafuna ukujongana no-Ammyy Admin (http://www.ammyy.com/), ayifuni ukufakela, ukubhalisa okanye izicwangciso ezithile zokucwangcisa.